November 29, 2012 - Written by
Hiiraan:-Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee DFS Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo wafdi uu horkacayo ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho ka dib markii uu booqasho ku tagay shalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee DFS ayaa kulamo la qaatay maamulka gobolka, kan degmada iyo odayaasha gobolka Hiiraan waxaana uu tacsi u diray dhamaan odayaasha gobalka Hiiraan iyo eheladii uu ka geeriyooday guddoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan Sheekh Muxumed Sheekh Xuseen (Marya-cadde)oo lagu dilay magaalada B/weyne.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee DFS ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliyey wasiirka kheyraadka DFS Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo xildhibaano iyo saraakiil ka socta Dowlada Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in ujeedada socdaalkiisa ay ahayd in soo kormeero gobalka iyo in uu latashiyo la soo sameeyo madaxda iyo Saraashiisha gobalka Hiiraan si wax looga qabto amniga magaalada B/weyne iyo sidii gobalka oo dhan looga saari lahaa Ururka Al-Shabaab.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee DFS Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa intii uu shalay joogay magaalada B/weyne waxaa uu booqday dugsiga tababarka ciidanka DFS oo ay gacanta ku hayaan ciidanka dalka Jabuuti oo ka tirsan ciidamada AMISOM.